Juventus oo isku dayaysa in dalabkeeda ugu horeeya ay ka gudbiso xidig muhiim ah – Gool FM
(Juventus) 16 Dis 2018. Kooxda Juventus ayaa qorsheeneysa inay wada hadal la furato wiilka reer France ee Adrien Rabiot, kaasoo lala xiriirinayo inuu ka dhaqaaqi doono Paris St Germain.
Wargeyska “TUTTOmercato” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Juventus ay diyaarin doonto maalmaha soo aadan dalab ay ka gudbin doonto Adrien Rabiot si ay kagala soo saxiixato PSG.
Waxaa dhawaan soo baxayay warar ku aadan in madaxweynaha kooxda PSG ee Nasser Al-Khelaifi uu kulan la qaatay Adrien Rabiot, si ay kaga wada hadlaan suurtagalnimada uu kusii joogi karo kooxda Paris St Germain.
Juventus ayaa sugi doonta natiijada kasoo baxda dalabkeeda ugu horeeyo ay ka gudbin doonto Adrien Rabiot si ay ula soo saxiixato, gaar ahaan xili heshiiskiisa kooxda PSG uu dhacayo dhamaadka xili ciyaareedkan, waxaana suuragal noqon karta in beeca xurta ah uu kaga dhaqaaqo xili ciyaareedka soo aadan.
Kooxda reer Talyaani ayaa u aragta in saxiixa Adrien Rabiot ay u noqon doonto dhiiragalin xoogan xili ciyaareedka soo socda hadii ay lasoo wareegaan, si ay ugu xoojistaan khadkooda dhexe.